Imisebenzi yezandla yokuzalwa eyi-10 yangempela futhi emnandi | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Imisebenzi yezandla yezinsuku zokuzalwa
Kwesinye isikhathi isipho esihle kunazo zonke umuntu angasinika abanye abantu siyinto elula eyenziwe ngezandla zabo, njengoba kwenzeka yezandla usuku lokuzalwa. Lezi zinhlobo zezipho kumnandi ukuzenza njengoba zizonikezwa ngoba ziyisikhumbuzo esihle kakhulu.
Eminye imisebenzi yalolu hlobo ilungele ukuhlobisa indawo yokugubha, ukunikeza isipho izivakashi zephathi noma ukumane nje izingane zijabule ngokuzenza phakathi kwemidlalo noma ngemuva kokuphaka ikhekhe losuku lokuzalwa.
Uma ufuna imibono yezandla zezinsuku zokuzalwa, kokuthunyelwe okulandelayo uzothola imibono emihle kakhulu futhi elula yokwenza. Ungaphuthelwa!
1 Ibhokisi lekhekhe lokuzalwa ozoliphana ngalo
2 Imiqhele yezinsuku zokuzalwa zezingane
3 Uzenza kanjani izikhwama zokukhumbula usuku lokuzalwa
4 Izikhwama zikaswidi ezizenzele zona zokuzalwa
5 Ikhadi lesimemo sezinsuku zokuzalwa zezingane
6 Izintambo zomlingo zenjoloba ka-Eva
7 Izimbali zephepha ezilula kakhulu ukuhlobisa ubuciko bakho
8 Amaphenathi eqembu elihlobisayo
9 Uzenza kanjani izinto eziyisikhumbuzo ezimise uswidi
10 I-tiara yaseNdiya enezimpaphe ezinemibala
Ibhokisi lekhekhe lokuzalwa ozoliphana ngalo
Kwesinye isikhathi indlela isipho esivezwa ngayo ibaluleke kakhulu njengesipho uqobo. Uma umenywe ephathini futhi ufuna ukumangaza umfana wosuku lokuzalwa ngomsebenzi owenziwe nguwe, ngikweluleka ukuthi wenze lokhu ibhokisi lesipho elimiswe ngekhekhe.
Ungomunye wemisebenzi yezandla yokuzalwa yokuqala engenziwa yizingane futhi engabonisa ngayo bonke ubuciko bazo. Ukwazi inqubo yokucacisa, kokuthunyelwe Ibhokisi lekhekhe lokuzalwa ozoliphana ngalo Uzothola ividiyo ekhombisa igxathu negxathu kanye nohlu ngezinto ezidingekayo: amakhadibhodi, iphepha elinemibala, izindiza, amapompo ...
Imiqhele yezinsuku zokuzalwa zezingane
Ngaphambi kokuqala iphathi yosuku lokuzalwa, umqondo omuhle uwukuthi nikeza izivakashi le miqhele emincane ukuze bazigqoke kuwo wonke umcimbi. Ingane enosuku lokuzalwa ingabenza babasabalalise phakathi kwabangane babo lapho befika ephathini noma kungaba futhi umdlalo owodwa phakathi nosuku lokuzalwa ukuze zonke izingane ezibuthene lapho zenze umqhele wazo omncane.
Noma ngabe iyiphi inketho oyikhethayo, le miqhele ingenye yezinto zobuciko zokuzalwa ezilula ukuzenza futhi zenziwa ngezinto ezincane kakhulu njengekhadikhadi, amaribhoni, izimbali nokunye ukuhlobisa. Ngincoma ukuthi ufunde i-athikili imiqhele emincane yezinsuku zokuzalwa zezingane uma ufuna ukufunda ukuthi zenziwa kanjani igxathu negxathu. Kulula kakhulu futhi ngeke kukuthathe isikhathi eside ukukuqedela!
Uzenza kanjani izikhwama zokukhumbula usuku lokuzalwa
Ekupheleni kwanoma yiluphi usuku lokuzalwa lwabantwana, abancane babheka phambili ku-piñata noma isikhwama sezinto ezinhle abangaya ngazo ekhaya bejabule. Ubani ongathandi ukuthola isipho esihle sokubonga ngokuhambela umcimbi? Ngisho nabantu abadala!
Lokhu kungenye yemisebenzi yezandla zokuzalwa izivakashi ezizoyithanda kakhulu. Zinhle, zishibhile, futhi kulula ukuzenza. Uzodinga kuphela njengezinto zokwakha: amakhadi anesitembu, amaribhoni anemibala, imihlobiso yokuhlobisa izikhwama ezinjengezimbali, izitika, izinkinobho, izincwadi eziphrintiwe, isikele, umsiki kanye neglue.
Njengoba ukwenza lezi zikhwama zokukhumbula usuku lokuzalwa kudinga ukusetshenziswa kwezinto ezithile ezicijile, kungcono ukusiza ingane kulesi sinyathelo noma uzenzele ngokwakho ngqo. Ungabona inqubo yokwenza lo msebenzi wobuciko kokuthunyelwe uzenza kanjani izikhwama zezikhumbuzo zezinsuku zokuzalwa. Bazoba bahle!
Izikhwama zikaswidi ezizenzele zona zokuzalwa
Izikhwama zikaswidi ezizenzele zona
Zonke izikhwama zesikhumbuzo zidinga ukugcwaliswa ngokuthile okuzonikezwa isivakashi. Izingane zithanda ama-gummies namaswidi. Ngakho-ke kungani ungalungiseleli i- isikhwama samaswidi enziwe ekhaya ukuwafaka emasakeni esikhumbuzo?
Ungomunye wemisebenzi yezandla zokuzalwa ozoyithanda kakhulu futhi kulula ukuyilungisa. Eqinisweni, lezi zikhwama zoswidi zenziwa ngejiffy nangezinto ezenziwe kabusha.
Uma ufuna ukwazi inqubo yokwenza, ungaphuthelwa okuthunyelwe izikhwama ze-goodie ezenziwe ngezinsuku zokuzalwa. Lapho uwaqeda, konke okumele ukwenze ukuwagcwalisa ngama-lacasito, ama-conguito, ama-peladillas, i-sugus, i-chewing gum noma yiluphi olunye uswidi oluthandwa abafana. Noma kunjalo, ungabethula njengoba kunjalo, ngaphandle kokuba yingxenye yebhokisi lezikhumbuzo. Zizoba zinhle kakhulu uma wenza imodeli yevemvane.
Ikhadi lesimemo sezinsuku zokuzalwa zezingane
I-Las izimemo zezinsuku zokuzalwa Zingezinye zezinto zokuqala ezidingekayo ukuhlela iphathi yalolu hlobo ukuze izivakashi zazi indawo nesikhathi salo mcimbi.
Njengeminye imisebenzi yezinsuku zokuzalwa, amakhadi wesimemo nawo angalungiswa ekhaya. Ngaphezu kwalokho, kuyindlela enhle kakhulu futhi ekhethekile yokumema abangane bethu.
Eposini ikhadi lesimemo sokuzalwa kwengane Uzokwazi ukubona ukuthi lezi zimemo ezinhle kakhulu zenziwa kanjani ukuthi zinikezwe izingane kanye nabantu abadala. Zimbalwa kakhulu izinto ezidingekayo futhi zinhle kakhulu. Le modeli ekahle kanogwaja kepha ungabenza ngokwezifiso zakho nangama-motif wokuhlobisa owathandayo.
Izintambo zomlingo zenjoloba ka-Eva
Umphelelisi womdlalo ophelele wemiqhele yokuzalwa yezingane ebengikhuluma ngayo phambilini yilena ama-eva wirber magic wands ukuze izingane zidlale izinganekwane nezinganekwane.
Zinganikezwa ngosuku lokuzalwa izivakashi lapho zifika noma zenziwe ngesikhathi somcimbi ukuze izingane zibe nesikhathi esihle sokwenza le misebenzi yezandla ngezinsuku zokuzalwa. Kulula kakhulu futhi abancane bazowuthanda umqondo wokuzenzela bona!
Ungabona izinto ozidingayo kanye nenqubo yokukhiqiza kokuthunyelwe Izintambo zomlingo zenjoloba ka-Eva. Ngeke udinge izinto eziningi futhi ungazilungiselela nge-jiffy.
Izimbali zephepha ezilula kakhulu ukuhlobisa ubuciko bakho
Enye yezandla ezinhle kakhulu zokuzalwa ongazilungisa yilezi zimbali zephepha zokuhlobisa indawo lapho kubanjelwe khona iphathi. Ziphelele kuzo zonke izinsuku zokuzalwa ezenzeka entwasahlobo, ngoba zihambisana nengqikithi.
Okuhle ngalobu buciko ukuthi kulula kakhulu futhi kulula ukwenza ngakho ngeke kukuthathe isikhathi eside ukunaba isixha esihle sezimbali ezimibalabala. Umqondo wukwenza izimbali ezanele ukuthi zikwazi ukuhlobisa izindonga noma amatafula omcimbi ngazo. Ngisho ukubanika phakathi kwezivakashi. Zizoba zinhle kakhulu!
Ngaphezu kwalokho, ungazenza ngezinto osuvele unazo ekhaya njengamashidi anemibala nenjoloba ye-foam, i-glitter, imicu, iglu, isikele kanye neziphungumisi zegwebu.
Thola inqubo ephelele yokukhiqiza yalezi zobuciko eposini Izimbali zephepha ezilula kakhulu ukuhlobisa ubuciko bakho.
Amaphenathi eqembu elihlobisayo
Uma kukhulunywa ngokuhlobisa amaphathi ezinsuku zokuzalwa, alikho iphathi ngaphandle kokuhle amaphenathi okuhlobisa. Kungenye yezandla zobuciko zokuzalwa ezinikeza ukuthakazelisa okumnandi nokukhethekile kulo mkhosi, ikakhulukazi uma sizenza ngezifiso igama lomfana wosuku lokuzalwa, iminyaka yakhe noma simane nje sithi "Usuku lokuzalwa oluhle!"
Eposini Umhlobiso: Isifundo sePennant Uzothola yonke imininingwane yokwenza leli fulegi elihle elenziwe ngezandla elenziwe ngezandla. Izinto ozozidinga (amakhadibhodi anemibala, iphepha elihlotshisiwe, iglu, isikele…) uzozithola ngokuphelele ekhaya.
Ngokuklama lo msebenzi wobuciko, wena nezingane niyokwazi ukuvula umcabango wakho ngokuxuba imibala, ubujamo nokwakheka kubhanna efanayo yokuhlobisa. Uzobona ukuthi uzothola ubuciko obushibhile kakhulu futhi buhle.
Uzenza kanjani izinto eziyisikhumbuzo ezimise uswidi
Lesi sikhumbuzo esenziwe ngoswidi singesinye sezinto ezipholile kunazo zonke zokuzalwa ongazinikeza izivakashi zephathi. Bangagcwaliswa ngamaswidi, ushokoledi, izinsini noma izinsini. Akekho umuntu obabayo ngoshukela, ngakho-ke uzophumelela uma unikeza lezi zikhumbuzo ephathini lezingane zakho.
Kuwubuciko obulula kakhulu obubukeka obuhle futhi obubucayi, ongabenza ngezinto osuvele unazo ekhaya kusuka kwezobuciko obudlule njengamaphepha ethoyilethi, iphepha elinemibala, iphepha lokugoqa, amaribhoni, isikele kanye neglue. Akunamfihlo!
Ukuze ukwazi ukubona ukuthi kwenziwa kanjani igxathu negxathu, ngincoma ukuthi ufunde i-athikili Uzenza kanjani izinto eziyisikhumbuzo ezimise uswidi lapho uzokwazi khona ukubheka inqubo yokucacisa kabanzi. Kulula kakhulu ukuthi ngisho nezingane zingazenzela zona.
I-tiara yaseNdiya enezimpaphe ezinemibala
Lo msebenzi wobuciko ulungele iphathi enetimu yaseWest West noma uma umane ufuna izingane zijabule ngesikhathi somkhosi zenza lobu buciko obumnandi ongathatha ngazo izithombe ezinhle zokukhumbula. Kungumphelelisi ophelele emiqhele esikhulume ngayo ngaphambili!
La i-indian tiara enezimpaphe ezinemibala Ungomunye wemisebenzi yezandla zokuzalwa ezimibalabala futhi ezijabulisayo ezingenziwa ngabancane. Iphinde yenziwa ngezinto ezitholakala kalula, ngakho-ke ngeke kudingeke usebenzise imali eningi kakhulu.
Ukwazi ukuthi lobu buciko obunemibala benziwa kanjani, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe ama-tiary ase-indiya anezimpaphe ezinemibala. Lapho uzothola zonke izinyathelo zalobu buciko bokuqala abancane abazozijabulisa kakhulu ngabo.
Yikuphi kwalezi zingcweti zokuzalwa ongathanda ukuzenza emikhosini yakho elandelayo? Sitshele ukuthi iyiphi oyithandayo ukuyisebenzisa!
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » Imisebenzi yezandla yezinsuku zokuzalwa
Izilwane ezihlekisayo ezinezinti zokhuni
Imisebenzi yezandla ezi-5 ukuhlobisa indawo enesitayela se-boho